Okpu Uhie Na-ewebata Onyinye Na-enye Aka Na-abawanye Nkwado Dị adị | Site na Linux
Okpu Uhie Na-ewebata Onyinye Efu Na-abawanye Nkwado Dị
Na Disemba 2020, ndi otu Red Hat kwuputara onwu nke CentOS na nkwupụta ya, onye nnọchi anya Red Hat kwuru "na n'ime afọ na-esote anyị ga-esi na CentOS Linux, iwughachi nke Red Hat Enterprise Linux (RHEL), na CentOS Stream, nke na-abịa tupu ụdị ọhụrụ nke RHEL.
N'ịgbalị imeju ọdịiche a, Red Hat kwupụtara na Jenụwarị 20, 2021 gịnị ka m ga-eme mee Red Hat Enterprise Linux n'efu maka obere mmepụta deployments.
"Ọ bụ ezie na CentOS Linux nyere nkesa Linux n'efu, RHEL dịkwa taa site na Mmemme Mmepụta Red Hat," ụlọ ọrụ ahụ kwuru na post blog.
“Usoro nke usoro ihe omume ahụ gbochiri ojiji ya na ndị nrụpụta igwe ọ bụla. Anyị ghọtara na nke a bụ njedebe siri ike, "ka ọ gbakwụnyere.
Na nke ahụ, ugbu a ụlọ ọrụ na-ekwu okwu a na-agbasa usoro nke Mmemme Mmepụta Red Hat nke mere na ndenye ndokwa ọ bụla maka RHEL nwere ike iji ya rụọ ọrụ ruo usoro 16. Nke a bụ kpọmkwem ihe ọ bụ - maka obere ihe eji eme ihe, nke a bụ n'efu, RHEL kwadoro onwe ya.
N'ikpeazụ, Red Hat gbakwunyere RHEL efu maka ndị otu mmepe ndị ahịa.
“Anyị ghọtara na otu n’ime ihe ịma aka nke Mmemme Mmepụta Red Hat bụ ịmachi ya na onye mepụtara ya. Ugbu a, anyị na-emepe Mmemme Mmepụta Red Hat iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka otu ndị mmepe mmepe ka ha sonyere mmemme ahụ wee rite uru ya. Enwere ike ịgbakwunye ndị otu mmepe a na mmemme a na-akwụghị ụgwọ ọzọ site na ndenye aha ndị ahịa dị ugbu a, ”ka ụlọ ọrụ ahụ kwuru.
Dabere na Uhie, nke a na-enyere aka mee ka RHEL dịkwuo mfe dị ka ebe mmepe maka nzukọ ahụ dum, na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na, ekele maka mmemme a, RHEL nwekwara ike itinye ya site na Red Hat Cloud Access ma nwee ike ịnweta ya na igwe ojii ọha, gụnyere AWS, GCP na Azure, na enweghị mgbakwunye ego, belụsọ maka igwe ojii na-eweta nnabata ụgwọ.
Ọzọkwa, Red Hat kwuru na nke a chọrọ ka ọ na-eleba anya na mmepe ya na ụdị azụmaahịa ya iji gboo mkpa mgbanwe ndị a. Ọ sịrị, "Anyị kwenyere na mmemme ọhụrụ ndị a, na ndị ga-eso, na-aga n'ụzọ a." Uhie okpu na-eme ka CentOS Stream na njikọta maka RHEL, yana foto dị ka nke a:
Fedora bụ ebe maka ihe ọhụrụ dị mkpa, echiche, na echiche gbasara sistemụ arụmọrụ ọhụrụ. Nke a bụ nnoo ebe a ga-amụpụtakwa okpu ọzọ nke Red Hat Enterprise Linux.
CentOS Stream bụ usoro nnyefe na-aga n'ihu na-aghọ obere ụdị nke RHEL na-esote
RHEL bu sistemụ ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, nke ejiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọ bụla gburugburu ụwa, site na ndọtị igwe ojii n'ọtụtụ ebe data dị mkpa na ụlọ ọrụ sava dị na ọha na igwe ojii.
N'aka nke ọzọ, na ngwụcha February, site n'aka Jason Brooks, onye njikwa, Community Architect na Community Infrastructure, Office of Open Source Programs, kwupụtara ọkwa nke mmemme ọhụrụ n'efu ezubere maka mkpa na ihe a chọrọ nke oru, isi na ihe ndị ọzọ.
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) maka oghere ihe mepere emepe:
“Site na isonye na mmemme na-eto eto nke enweghị ego na ọnụ ala, RHEL for Open Source Infrastructure na-enye usoro dị mfe karị, nke doro anya karị, na ederede ọzọ maka ọrụ, obodo, ngalaba ụkpụrụ, na ndị otu sọftụwia na-enweghị uru enyere aka na oghere maka ịnweta ndenye aha RHEL. Ka anyị na-akwado ị ga n’ihu nụzigharị mmemme ọhụrụ a, anyị chọrọ ịkọwapụta ihe dịịrị ndị nwere oke ugbu a.
Ebe m kwuru na, ụdị RHEL a agaghị arụ ọrụ maka ndị nrụpụta niile emeghe oghere taa.
“Anyị ghọtara na mmemme a anaghị ekpuchi ọnọdụ ebe ọrụ mmeghe na-emeghe iji akụrụngwa CI (njikọta na-aga n'ihu) nke ndị ọzọ nyere. Mmemme a na ndị ọzọ ka na-aga n’ihu. Ya mere, anyị agwụbeghị ịgbasawanye mmemme RHEL iji gboo mkpa obodo ma na anyị chọrọ ịnụ n'ọnụ gị. "
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Okpu Uhie Na-ewebata Onyinye Efu Na-abawanye Nkwado Dị
Njikọ Steam na-abịakwute Linux ma nwee ike itinye ya na Flathub
OpenSSH 8.5 biara na UpdateHostKeys, ihe ndozi na ndị ọzọ